Blog RPM gị na-emebi emebi, mana Not naghị emeri Ọsọ ahụ! | Martech Zone
Wezụga enyemaka m na-agbalị ịnye ndị na-ede blọgụ ndị ọzọ site na blọọgụ a, ana m enyere ndị na-ede blọgụ aka aka. O di nwute, anaghi m etinye oge buru ibu ime nke ahu dika m choro - aghaghi m arusi oru iji kwụọ ego. Nyaahụ m wepụrụ ụbọchị ma gaa ogbako weebụ mpaghara. Nzukọ a dị oke egwu, ụbọchị kọmpat juputara na oge elekere 1 nke juputara na ozi sitere n'aka ndị ọrụ weebụ.
Oge mmalite nke ịde blọgụ juru n'ọnụ! Mgbe ị na-ede blọgụ ihe karịrị otu afọ, ị na-echefu na ọtụtụ ndị anaghị ekpughere blọọgụ ma ọ bụ teknụzụ ndị na-akpata ya. Otu n'ime ajụjụ kachasị mma nke nnọkọ ahụ bụ, "Olee otu m ga-esi kọwaa ọdịiche dị n'etiti blọọgụ na weebụsaịtị ọzọ." Aghaghị m iche echiche maka nkeji, wee kọwaa na ị gaghị enwe ike ịkọwa ọdịiche ahụ ọzọ. Ọtụtụ weebụsaịtị ọhụrụ tinyere ịde blọgụ dị ka ụkpụrụ nke ngalaba ọdịnaya. N'ezie, saịtị dị ka nke m 'dị ka' blog - yana nchịkọta nke akwụkwọ akụkọ na ibe obibi na usoro usoro usoro… mana ụfọdụ ndị ọzọ adịghị abịa nso!
Kedu onye kwesịrị ịde blọgụ?
Nnukwu ajụjụ ọzọ na-ajụ etu ịde blọgụ nwere ike isi nyere aka na ụlọ ọrụ na-abụghị ọrụaka ma ọ bụ ọrụ ndọrọ ndọrọ ọchịchị. Blọọgụ binyere onwe ha na ndọrọ ndọrọ ọchịchị n'ihi njuju na ego zuru ebe niile. Blọọgụ enyerela onwe ha aka na teknụzụ oge niile n'ihi na, na-eche ihu ya, ịbụ onye na-ede blọgụ na-enwekarị ihe ịga nke ọma maka teknụzụ. Blọọgụ nwere ike kpamkpam nyere aka na ụlọ ọrụ ọ bụla, agbanyeghị! Ngwongwo ntanetị ndị na-ede blọgụ na usoro njikwa ọdịnaya ejirila ọtụtụ nhọrọ ndị na-enye aka.
Enyi m, Glenn, dere blog mgbe o jere ozi na Mozambique. O juru m anya na okpukpe na ndị na-enyere ndị mmadụ aka anabataghị ịde blọgụ karịa. Fred Wilson blọọgụ banyere ịbụ onye Venture Capitalist. Ọ na-eju m anya na ụlọ ọrụ niile na-anaghị eme blọọgụ. Gini mere na ndi sayensi adighi emeputa blog ma kesaa ihe ha choputara? Kedu ihe kpatara na ndị na-ere ahịa anaghị ede blọgụ gbasara imeghe ụlọ ahịa, ọrụ ndị ahịa na ọpụrụiche? Kedu ihe kpatara na Onye isi ala anaghị eme blog? (Onweghi onye na-ege nti nzuzu redio!) Gini mere na ndi uwe ojii anaghi ekwu okwu banyere ihe ha na eme n’obodo? Kedu ihe kpatara na ndị nkuzi anaghị ede blọgụ ma kesaa ụbọchị ha iji nyere ụmụ akwụkwọ na nne na nna aka? Ha kwesịrị ka ha bụrụ !!!
Nbudata Blogging and Content Management System Convergence
Ihe atụ nke weebụsaịtị nke na-adịghị ele ihe ọ bụla anya dịka blog CNET. The ngalaba akụkọ nke CNET n'ezie bu a blog na bụla uche nke okwu. Isiokwu ndị ahụ dị n'usoro oge na usoro nke ọ bụla nwere permalink, na-etinye njikọ, nkọwa, pings, yana ụfọdụ njikọ njikọta mmekọrịta mmadụ na ibe ya. Ma ọ bụ saịtị akụkọ !?
Usoro Nchịkọta Ọdịnaya na-ejide ịde blọgụ… ma ọ bụ nke ọzọ. Ndị na-eweta ngwa weebụ na-amata SEO uru nke ịde blọgụ ma tinye atụmatụ ndị ahụ na ngwa ha. Mana ha edozibeghị ọtụtụ okwu, n'agbanyeghị! Nyaahụ m dere banyere itinye uche na ike gị iji nwee ihe ịga nke ọma.
De blọgụ dị iche. Enwere otutu ihe na itinye ego na teknụzụ, yana ọtụtụ itinye ọdịnaya gị. Ọtụtụ ndị na-ede blọọgụ mara mma nwere ọdịnaya dị egwu mana saịtị ha anaghị eto… ọ bụghị n'ihi na ọ bụ blọọgụ ọjọọ, mana n'ihi na onye na-ede blọgụ anaghị aghọta ma jiri teknụzụ dọta ndị na-agụ akwụkwọ ọhụrụ.
N'ihi ọchịchọ ịmata ihe, m googled Nchịkọta Blog. Agaghị m akpọ aha, mana m tụlere banyere iri na abụọ nke saịtị nke ụlọ ọrụ ndị ahụ ma ọ bụ ndị mmadụ wepụtara onwe ha dịka 'Blog Coaches'. O nweghi onye n’ime ha kwuru maka teknụzụ ahụ! Na nyochaa nkọwa, ọtụtụ "Blog Coaches" bụ naanị ndị na-ede akwụkwọ na ndị na-emepụta akara. O doro anya na ndị a bụ ihe dị mkpa nke ụlọ ọrụ aha, mana geesh.
Echere m na ọ dị ka ịgba ọsọ ụgbọ ala na ọ dịghị mgbe ọ na-agbanwe agbanwe. Injin gị na-agbake ọsọ ọsọ etu o nwere ike, mana onye ọ bụla na-efega n’enweghị ike ịghọta ihe kpatara ya! Ga-achọ onye nchịkwa na-aghọta otu ụgbọ ala dum na-arụ ọrụ ma ọ bụrụ na ịchọrọ imeri n'ọsọ ahụ, ọ bụghị naanị otu ị ga-esi gbaa ya. Chọrọ onye ga-apịchaa ọsọ ọsọ na ike ọ bụla na blọọgụ NA sọftụwia ịde blọgụ. Ihe ịga nke ọma m na ịde blọgụ bụ n'ezie njikọta nke abụọ. Aghọtara m na oge ụfọdụ anaghị m ede nke ọma, mana m na-eme ya site na ịgbanye ounce ọ bụla nke ịnyịnya si na injin m.
Tags: onye nchịkwa blogịde blọgụCMSusoro njikwa ọdịnayaEdhere Wilson
Mee 10, 2007 na 10: 33 PM
Ihe mara mma Doug.
Kedu nzukọ ọgbakọ ị gara? Ana m aga otu izu ụka a na Chicago.
Atụrụ m anya inweta ọtụtụ ihe na ya dị ka gị n’ọgbakọ gị.
Ndị si MyBlogLog, VideoSticky na BlogTalkRadio ịkpọ aha ole na ole ga-anọ. Ọ ga-abụ ezigbo ihe mmụta.
Aga m ejide n’aka na gị na ndị na - agụ akwụkwọ gị kerịta ihe m mụtara na ngwụsị izu ahụ.
Nọgide na-arụ ọrụ dị ukwuu.
Mee 11, 2007 na 1: 07 AM
Ana m arụ ọrụ na obere ọrụ na-enyere ha aka ịde blọgụ. Ha na-akwụbu onye ọzọ ụgwọ ka emezie HTML na saịtị ha maka ihe ndị bụ isi n'ihi na ha na-atụ ụjọ imebi koodu ahụ…
Ozugbo m gosiri ha na ha nwere ike ịme akwụkwọ akụkọ / akwụkwọ akụkọ nke aka ha site na blog, ha hụrụ ya n'anya ozugbo.
Mee 11, 2007 na 10: 10 AM
Anọ m n'ezie na obere "nnukwu" nnọkọ na Wednesday, mana m ka na-enwe oge na mkparịta ụka. Daalụ maka iwepụta oge.
Anọ m na-ede blọgụ n'onwe m ihe dị ka afọ atọ na ọkara (echere m na ndị mụrụ m bụ ndị kachasị agụ m!), Abụkwa m nnukwu onye na-akwado iji ịde blọgụ nke ọma. Arụ ọrụ na a pụrụ iche pụrụ iche na-abụghị uru, ezie, M mgbe niile nwere ịgbanwe ndụmọdụ banyere "ahịa" na "ahịa" dabara anyị ozi na-agwa ndị mejuputara na-aghọta fim. Enweghi m ohere ịjụ, mana m ga-achọ ịma na echiche gị banyere otu ntụgharị nke ịde blọgụ nwere ike isi bụrụ ọrụ na-enweghị uru na ụlọ ọrụ.
Daalụ ọzọ maka ịbụ akụkụ nke ogbako ahụ!
Mee 11, 2007 na 10: 37 AM
Enwere m mmasị ịnọ na ogbako ahụ. Kedu nnukwu ìgwè ndị mmadụ, enyere onye ọ bụla ume ma sonye. Enweghị m ike ijide onwe m, mana enwere m obi ụtọ (Ikekwe ọ bụ Venti Mocha m nwere tupu oge ahụ).
Ndị na-enweghị uru bụ otu ịtụnanya. M na a nzukọ a di na nwunye ebe a na mpaghara na-ekwu ihe banyere Social ịkparịta ụka n'ingntanet. Echere m na e nwere ohere abụọ:
1. kekọrịta ozi n’agbata abaghị uru. Anaghị m ahụ ọtụtụ asọmpi n’etiti ha, ọ dị ịtụnanya etu ha si anwa ịrụkọ ọrụ ọnụ! Itinye ihe omuma na blog iji mee ka ndi mmadu di n'otu nwere ike buru uzo iji kesaa atumatu na ozi ma nyere ndi na-abaghi ​​uru aka aka.
2. ringkekọrịta ozi na ndị nyere gị na ndị ahịa. Naanị site na ịkpọ ụlọ ọrụ 'Enweghị uru' na-eme ka m chee mmefu ego na nsogbu ndị siri ike. N'ime obodo, amaara m na Indianapolis Symphony abụghị uru na ha na-enwe ike ịgbatị akụrụngwa dịka azụmaahịa onye ọ bụla. Echere m na ọ ga-aba uru ịkọrọ ndị nyere ha ya nke ahụ! Echere m na ndị mmadụ ga-adịkwu njikere ịkekọrịta maara etu esi etinye ego ndị ahụ. (Nakwa ịkwalite ihe omume mpaghara, wdg.)
Mụụrụ kọfị n’abalị ụnyaahụ ya na ndị Indianapolis Cultural Trail folks ma ha tụlere otu ụzọ Arts na Entertainment si aga Star kpamkpam. Ha choro uzo di onu ala iji nweta okwu a ma Blog bu uzo kacha mma iji mee nke a!
Ọ ga-amasị m izute nzukọ kọfị ma kwurịta otu m ga-esi nyere gị aka!
Mee 11, 2007 na 1: 29 PM
Offọdụ n'ime 'Blog Coaches' na-echetara m ndị ochie na-ere mmanụ mmanụ. Lee anya!
Mee 11, 2007 na 7: 15 PM
Ee - otu n’ime ihe m hụrụ na-atọ m ụtọ bụ na ọ bụ ole na ole n’ime ndị ‘nchịkwa’ blọọgụ nwere blọọgụ n’onwe ha. Ọ bụrụ na ịnweghị ịde blọgụ n'onwe gị, kedu ka ị ga - esi jigide na teknụzụ ma gbanwee na 'blogosphere'?
Ọ ga-adị ka ị were onye ndụmọdụ SEO nke na-enweghị weebụsaịtị. Ọ dị nnọọ ịtụnanya!